author - हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
हेलो शुक्रबार का लेखहरु
नयाँ आइफोनमा के छ ?
हेलो शुक्रबार, भाद्र ३०, २०७४
पाँच महिने हल्लालाई सत्य साबित गर्दै एप्पलले मंगलबार आफ्नो नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ । पहिले दाबी गर्दै आएजस्तो एप्पलले आइफोन एट र एट प्लस सार्वजनिक गर्‍यो ।
इतिहास बिर्साउने प्रयास
हेलो शुक्रबार, भाद्र १६, २०७४
अघिल्लो वर्ष जे भयो, त्यो कसैले बिर्सने छैन,’ अघिल्लो साता ग्यालेक्सी नोट एट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामसुङ कम्पनीका मोबाइल डिभिजन प्रमुख डीजे कोले भनेका थिए ।
हेलो शुक्रबार, भाद्र २, २०७४
एक वर्ष भयो, द हट सञ्चालनमा आएको । माइतीघरमा रहेको यो रेस्टुरेन्टका सञ्चालकले पछिल्लो एक वर्षमा गरेको अनुभव र सिकाइ कस्तो रह्यो त ? ‘हामीले प्रत्येक दिन केही न केही सिकिरहेका छौं र प्रत्येक पल्ट सुधारका क्रममा छौं,’ रिकेश श्रेष्ठ भन्छन् ।
नबुझेको ‘हिरोइन म्याटरियल’
हेलो शुक्रबार, श्रावण २०, २०७४
काठमाडौं– ‘हेर, चिन्ता नगर। कि काठमाडौंमा छन्, कि तैं मात्रै होस्। अरू कतै छैनन्’ भनेरै बाबुले मन शान्ति गराइरहन्थे। खासमा कक्षाकोठामा सबैले एउटी छात्राको नाम लिएर गिज्याउने गर्थे। त्यही भएर नाम फेरिदिन ढिपी गर्दा बाबुले घरिघरि सम्झाइरहनुपथ्र्यो।
सन् १९९० को दशकदेखि फिचर फोन निर्माण गरेर लोकप्रिय बन्न पुगेको नोकियाले ४ वर्षको विश्रामपछि स्मार्टफोनको नयाँ शृंखलाका साथ पुनरागमन गरेको छ। सीडीएमए, जीएसएम र डब्लू–सीडीएमए निर्माणमा ख्याति कमाएको फिनल्यान्डको बहुराष्ट्रिय सञ्चार कम्पनी नोकियाले केही समयअघि स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो।
आऊ बढाऊ हातहरु...
हेलो शुक्रबार, श्रावण १३, २०७४
पोखरेली युवती सरिता गुरुङको कुदाकुद हेर्न लायक छ। अघिल्लो आइतबार पोखराबाट काठमाडौं आएकी उनी भोलिपल्टै चाँगुनारायणमा थिइन्, पर्सिपल्ट बुङमती। मंगलबार बिहान भने उनी चरिकोट पुगिसकेकी थिइन्।